पल र मलिकासँग केन्द्र मोसनको सम्झौता, ६ महिना अरुको भिडियोमा काम गर्न नपाउने ? « Mazzako Online
पल र मलिकासँग केन्द्र मोसनको सम्झौता, ६ महिना अरुको भिडियोमा काम गर्न नपाउने ?
नायक पल शाह र धेरैको क्रश मलिका महत अहिलेको हिट जोडी हो । बिशेषत ‘फुलबुट्टे सारी’ र ‘टाढा भएपनि’ दुई गीतमा काम गरेका पल र मलिकाको जोडीलाई धेरैले रुचाएका छन् । यो जोडीलाई सामाजिक सञ्जालमा दर्शक आफैले ‘पिएम’ जोडी भनेर नाम समेत दिएका छन् । ‘पिएम जोडीको अरु धेरै भिडियोहरु हेर्न मन छ, यो जोडीलाई सिनेमामा पनि हेर्न मन छ’ भन्ने आशयका हजारौं कमेन्टहरु दर्शकहरुबाट आउने गरेको छ ।
‘फुलबुट्टे सारी’ र ‘टाढा भएपनि’ यि दुबै बम्पर हिट गीतको भिडियो निर्माण भने केन्द्र मोशन पिक्चर्सले गरेको हो । केन्द्र मोसनले पल र मलिकासँग हालसालै ६ महिनाका लागि कन्ट्रयाक समेत गरेको छ । सम्झौतापत्रमा पल र मलिकाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अब ६ महिनासम्म पल र मलिकाले सँगै अरु बाहिरी ब्यानरमा काम गर्न पाउनेछैनन् । पल र मलिकालाई लिएर केन्द्र मोसनले नै लगभग १० वटा जति भिडियो बनाउने तयारी गरेको भन्ने बुझिएको छ ।
६ महिनको दौरानमा पल र मलिकालाई लिएर काम गर्न चाहने अरु ब्यानरहरुले कम्तीमा ६ महिनसम्म कुर्नु पर्ने देखिएको छ । यतिबेला भने मलिका महतको परिक्षा चलिरहेकोले गर्दा भिडियोको काम रोखिएको हो । उनको परिक्षा सकिने बित्तिकै धमाधम भिडियो मेकिङ्गको काम अघि बढ्ने भनेर केन्द्र मोसन पिक्चर्सले बताएको छ ।
त्यस्तै गरेर केन्द्र मोसन पिक्चर्सले पल र मलिकालाई नै राखेर सिनेमा बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । यतिबेला सिनेमाको स्क्रिप्टको काम धमाधम भईरहेको छ । कुनै बेला पल र आँचल, ‘आँप जोडी’ भनेर चिनिएको थियो, रुचाईएको थियो भने यतिबेला ‘पिएम जोडी’, पल र मलिका भनेर निकै चर्चामा छ ।